Waxaa jira baahi aad u ba'an oo lagu shubo SNFs ilo dheeraad ah, ma aha oo keliya qalabka difaaca shakhsi ahaaneed, laakiin sidoo kale ilaha kahortagga infekshinka iyo shaqaalaha.
Tan iyo bilowgii cudurka faafa ee SARS-CoV-2 / COVID-19 ee Maraykanka, waxaan si weyn u ogaanay u nuglaanshaha dadka bukaanka qaarkood. Horaantii, xarumaha kalkaalinta caafimaad ee xirfadlayaasha ah iyo xarumaha kale ee daryeelka muddada-dheer waxay bilaabeen inay muujiyaan u-janjeeridda gudbinta caabuqa fayraska.
Laga soo bilaabo kheyraadka kahortaga infekshinka xadidan ilaa bukaanada nugul ee bukaanka ah iyo shaqaaluhuna si khafiif ah u fidiyaan, bay'adahan waxay muujiyeen balanqaad in cudurka laqabanayo In kasta oo aan ogayn in tani ay tahay dhibic daciif ah, intee in le'eg ayaa cudurka ku dhacday? Maalmihii ugu horreeyay ee cudurka dillaacay, baaritaanka waxaa kaliya lagu sameeyay kuwa leh astaamo, laakiin maadaama kheyraadka ay kordheen, sidoo kale helitaanka baaritaanka ayaa sidoo kale leh. Daraasad cusub oo laga soo xigtay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Warbixinta Toddobaadka ah (MMWR) ayaa lagu qiimeeyay baahsanaanta COVID-19 ee xarumaha kalkaalinta caafimaadka ee Detroit (SNFs) laga bilaabo Maarso illaa Maajo ee sannadkan.
Adeegsiga sahaminta baahsanaanta dhibcaha ee dhammaan shaqaalaha iyo dadka deegaanka la tijaabiyey iyadoon loo eegin astaamaha, waxay ka heleen tirakoob aad u walaac badan guud ahaan lix iyo labaatan ka mid ah Detroit's SNFs. Tijaabadu waxay ka dhacday xarumo badan oo kala duwan iyada oo ku saleysan mudnaanta waxaana lagu sameeyay iyadoo lala kaashanayo waaxda caafimaadka magaalada. Intaas waxaa sii dheer, cilmi baarayaashu waxay sameeyeen qiimeyn kahortag infekshinka goobta iyo la-tashiyo - “Laba qiimeyn IPC oo dabagal ah ayaa loo sameeyay 12-ka xarumood ee kaqeyb galaya sahanka labaad waxaana kamid ahaa baaritaanka wada shaqeynta la adeegsanayo iyadoo la adeegsanayo sagxadda dhismaha, keenista iyo isticmaalka qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed, gacanta dhaqanka nadaafadda, qorshaynta yareynta shaqaalaha, iyo howlaha kale ee IPC. ”
Waaxda caafimaadka maxalliga ah waxay gacan ka geysatay ururinta macluumaadka natiijooyinka wanaagsan, xaaladda astaamaha, isbitaallada la dhigo, iyo dhimashada. Ugu dambeyntiina, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in laga bilaabo Maarso 7 illaa 8-da Maajo, 44% oo ka mid ah 2,773 Detroit SNF deggenayaasha lagu ogaadey inay ku wanaagsan yihiin SARS-CoV-2 / COVID-19. Da'da dhexdhexaadka ah ee dadkaas wanaagsan waxay ahayd 72 sano 37% waxay ku dhammaatay isbitaal dhigid. Nasiib darrose, 24% ka mid ah kuwii baaray cudurka, way dhinteen. Qorayaashu waxay xuseen in "566 bukaan oo ka tirsan COVID-19 oo soo sheegay astaamo, 227 (40%) ay ku dhinteen 21 maalmood gudahood baaritaanka, marka la barbar dhigo 25 (5%) oo ka mid ah 461 bukaan oo aan soo sheegin wax astaamo ah; 35 (19%) dhimashadu waxay ka dhacday 180 bukaan oo aan la garanayn calaamadaha cudurka. ”
12-ka xarumood ee kaqeybqaaday sahanka baahsanaanta labaad, sideed kamid ah ayaa dhaqan galiyay lashaqeynta bukaanada togan ee kusugan meelaha loogu tala galay sahanka kahor. Xarumaha badankood waxay tirakoob ku sameeyeen qiyaastii 80 bukaan ah iyo kuwa la baaray inta lagu gudajiray sahanka labaad, 18% waxay heleen natiijooyin wanaagsan lamana oga inay fiicnaadeen. Sida qorayaashu xusayaan, daraasadani waxay tilmaameysaa u nuglaanshaha bukaankan bukaanka ah iyo heerka weerarka sare. Dhamaan 26 SNFs, waxaa jiray guud ahaan heerka weerarka 44% iyo heerka isbitaal dhigida ee laxiriira COVID-19 ee 37%. Tirooyinkani waa kuwo naxdin leh oo tilmaamaya baahida sii socota ee goor hore lagu ogaanayo, dadaalada looga hortagayo infekshinka, wada shaqeynta, iyo la shaqeynta waaxda caafimaadka bulshada ee deegaanka. Waxaa jira baahi aad u ba'an oo lagu shubo SNFs ilo dheeraad ah, ma aha oo keliya qalabka difaaca shakhsi ahaaneed, laakiin sidoo kale ilaha kahortagga infekshinka iyo shaqaalaha. Maaddaama kuwani ay yihiin deegaanno nugul, taageerada joogtada ah waxaa loo baahan doonaa oo keliya muddada cudurku socdo laakiin si wanaagsan kadib.